Kedu ka ahịa eletrọnik si arụ ọrụ? | ECommerce ozi ọma
Na - ịzụta ngwaahịa na ntanetị, nke nwekwara enwekwu obi abụọ na ọchịchọ ịmata banyere otú azụmahịa kọmputa. Ọtụtụ n'ime anyị nwere ike ịzụ ahịa na ntanetị site na eji kaadị ego elektrọnik, nke anyị ga-edebanye aha na ibe e-commerce ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịzụrụ ụdị ọ bụla, mgbe ahụ anyị ga-akọwa etu usoro nzụta a dum si arụ ọrụ yana usoro nchekwa a na-ewere na nke a.
1 Nzọụkwụ ịzụta na ịntanetị
2 Kedu ihe na-eme n'azụ azụmahịa?
3 Otu esi amata ma ọ bụrụ na ahịa eletrọn dị mma
4 Enwere ike ịkwụsị azụmahịa ịntanetị?
Nzọụkwụ ịzụta na ịntanetị
Ppingzụ ahịa n'ịntanetị taa aghọwo ugbu a na ọdịnihu. Na e-commerce ọganihu bụ eziokwu, nke mere na ịmara otú ọrụ eletrọniki si arụ ọrụ dị mkpa. Maka onye na-ere ere na onye ahịa.
Ma, Kedu usoro ịzụ ahịa n'ịntanetị? Anyị na-akọwara gị ya:
Onye ọrụ na-abịa na eCommerce n'ihi na ọ na-achọ otu ngwaahịa. Iji mee nke a, ma gaa na peeji ahụ, ma ọ bụ jiri igwe nchọ ihe n'ịntanetị chọta ya.
Ozugbo o nwere ya, onye ọrụ anaghị ahapụ naanị ya; O kwere omume na ị ga-achọ otu ngwaahịa ahụ na ụlọ ahịa ndị ọzọ wee chọpụta ebe ọ kachasị akwụ gị ụgwọ. Nke a ga-adabere na ụgwọ mbupu, ọnụahịa ngwaahịa, nnweta, ịkwụ ụgwọ na ụzọ mbupu, na oge mbupu.
Mgbe ị kpebiri ịzụta ya, ị ga-aga n'ihu ịhụ usoro ịkwụ ụgwọ mana nke mbụ ị ga-ahụ na ọ bụ ụlọ ahịa na-enye gị obi ike, ya bụ, na ị naghị eche na ọ bụ "ojoro", "wayo" ma ọ bụ nke ahụ ị ga-atụfu ego gị. Nke a bụ otu ihe dị mkpa ịre ahịa kọmputa ebe ọ bụ na, ọ bụrụ na onye ahụ ga-azụ ya kpebiri na a gaghị atụkwasị gị obi, ma ọ bụ na ị naghị enye ha ezigbo nchekwa, ha nwere ike ghara ịga n'ihu (n'ime N'eziokwu, enwere ndị ọrụ dị elu nke setịpụrụ ụgbọ ibu na ntanetị mana anaghị aga n'ihu karịa usoro ịkwụ ụgwọ, ma ọ bụ n'ihi na ha atụkwasịghị obi, n'ihi na ọnụahịa ikpeazụ dị oke ọnụ karịa na saịtị ndị ọzọ ma ọ bụ n'ihi na ha na-akwa ụta).
Ọ bụrụ na ha na-aga n'ihu, mgbe ahụ, a na-eme azụmahịa na ntanetị (na-ejikarị kaadị akụ, mana a na-ejikwa usoro ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ dịka Paypal, nyefe, ego na nnyefe ...) na ire ere agwụla. N'ezie, ọ gaghị emechi ruo mgbe onye ahịa ahụ natara iwu ha ma ha were ụbọchị ole na ole iji hụ ma ha weghachite ya ma ọ bụ na ọ bụghị.
Kedu ihe na-eme n'azụ azụmahịa?
Ke akpa ilekiri, ihe na-eme bụ na anyị na-abanye a e-shopping weebụsaịtị, Anyị na-ahọrọ ngwaahịa ndị anyị chọrọ ịzụta, anyị na ụgbọ ala ịzụ ahịa na-emekọrịta ihe ma na njedebe anyị họrọ nhọrọ ịzụta, wee banye anyị data nkeonwe na nke kaadị anyị.
N'okwu ndị ọzọ dị mgbagwoju anya; onye ọrụ banye na zuo ihe nkesa na Secnweta SSLntanetị SSL Internetntanetị Amụma. N'ikpeazụ, a na-ewe ozi ahụ gaa n'ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ. Ihe a niile na-aga site na usoro ịkwụ ụgwọ, kaadị ejiri zụọ ihe jikọtara ya na Banyere Banyere, nke na-enyocha ozi na-echebara ọtụtụ mgbanwe iji chọpụta ma azụmahịa ahụ ọ ziri ezi.
Maka nkwenye azụmahịa a na-enyocha ụfọdụ na-adabere na algorithms mara mma nke na-amụ banyere omume ndị ahịa. Iji maa atụ: ebe ị zụrụ kacha, mba ibi, wdg.
Nzụta niile emere site na kọmputa na-agabiga usoro dị iche iche, nke a dabere na ihe nkesa ị nọ na otu ị si azụ ihe. Ọ bụrụ na ị bụ oge mbụ na ịzụ ahịa onlineCheta na enwekwara nsogbu ndị ọzọ dị oke mkpa dịka nchekwa nke kaadị gị, nke ị ga-ebu n'uche tupu ị zụọ ihe mbụ ịntanetị.
Otu esi amata ma ọ bụrụ na ahịa eletrọn dị mma
Mgbe ị na-azụ ihe n'ịntanetị, belụsọ ma inwere ọtụtụ ahụmịhe, usoro nke mbụ ga-efu. Ihe kpatara na eletrọniki, maka nwa oge ugbu a, dị ụkọ ma ndị mmadụ lere anya nke ọma ihe ha ga-azụ iji mee nke ahụ.
Ma ọ bụ eziokwu, eziokwu tinye data nkeonwe gị, nye nọmba kaadị gị, ma ọ bụ ihe metụtara ebe i bi ma ọ bụ ụlọ akụ gị, na-eme ka ụjọ na-atụ gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị abụghị nke gị ntụkwasị obi.
Ya mere, mgbe ị na-ere ahịa eletrọniki, ọ dị mkpa ịtụle ọtụtụ akụkụ ga-eme ka ndị ahịa nwee nchebe. Olee ihe ndị ọ bụ?
Gbalịa igosipụta data gị nke ọma. Were ya na ị gara ibe weebụ ebe ha tinyere ngwaahịa ndị dị ọnụ ala. Agbanyeghị, ị maghị ebe ha ga-eziga ha, ọ bụrụ na ha nọ na Spen, ọ bụrụ na mmadụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ dị n’azụ ha. Enweghị ụzọ ịkpọtụrụ ha (enweghị email, ekwentị). You ga-atụkwasị obi inye data gị n'agbanyeghị etu ọnụ si dị? Eleghị anya ọ bụghị. Ọfọn, nke ahụ bụ ihe ị kwesịrị iche echiche iji nye ndị ahịa gị nghọta.
Kwado ụdị ịkwụ ụgwọ dị iche iche. Ọtụtụ ndị anaghị achọ ịzụta ntanetị site na kaadị akụ. Agbanyeghị, ịmefe ego, ịnata ego na nnyefe ma ọ bụ Paypal na-anabata nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-enye ọtụtụ ụdị ịkwụ ụgwọ, ma na-ejedebeghị na nke otu, ọ ga-eme ka ha nwekwuo obi ike na ire elektrọnik adịghị mma. Ma echekwala na n'ihi na usoro ịkwụ ụgwọ dị ọnụ karịa ha agaghị anabata ya; oge ụfọdụ, ịnwale, ha na-eji usoro dị oke ọnụ eme ihe iji jide n'aka, ma ha ga-aga nke kachasị mfe ma kachasị mma.
Mepụta nchebe na ụlọ ahịa gị n'ịntanetị. Nke a dị ezigbo mkpa, n'ihi na ịchọrọ, site na iwu, iji hụ na echekwara ego gị eCommerce. Kedu ka esi enweta ya? Ọfọn, dabere na usoro nke ị wuru ụlọ ahịa, na akụ gị, wdg. Ihe kachasị mma bụ ịgwa onwe gị ka ị mara ụdị iwu ị ga-agbaso yana otu esi eme ya, ọkachasị iji zere nra nke nwere ike ịdakwasị gị.
Nọgide na-agwa onye ahịa banyere usoro niile eme. A na-anata iwu ahụ na awa 24-48, mana ọ dị mkpa na egosiri ya ka e wee mara nke bụ steeti ndị ọ na-esi na ya agafe.
Enwere ike ịkwụsị azụmahịa ịntanetị?
Were ya na ị ka zụrụ ihe ma na nkeji ise, ma ọ bụ tupu mgbe ahụ, ị ​​akwala ụta maka nzụta ahụ. Kagbu ya ga-adabere na ụlọ ahịa ebe ị mere ya, mana n'ozuzu ọ dịghị mfe dịka ọ nwere ike ịbụ maka ịga ụlọ ahịa nkịtị ma weghachite ihe ị zụtara.
Ma ọ bụ ya enwere ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ebe ọ dị mfe ịkagbu ihe niile, dị ka Amazon, ebe site na ịsị na ị zụtara ya n'amaghị ama, n'ihe gbasara nzọụkwụ 2-3, ị edozila ya. Ma gịnị banyere ndị ọzọ nke eCommerce?
Nkwado anyị bụ ndị a:
Kpọtụrụ ụlọ akụ gị. Ọ bụrụ n’inwere ike ịntanetị, mee nke a ma kagbuo azụmahịa ị mere. Ọ bụrụ na ịnweghị ike, kpọọ ụlọ akụ gị ma gwa ha ka ha nyere gị aka ịkagbu ya.
Dee ụlọ ahịa. Storeslọ ahịa dị n'ịntanetị nwere ike ịkparịta ụka, netwọkụ mmekọrịta, ekwentị ma ọ bụ email. Can nwere ike ịkpọtụrụ ha ma kọwaa nsogbu ahụ merenụ ka ha wee nwee ike ịkagbu iwu ị nyere. Ihe nke a ga-eme bụ weghachi ego ahụ n'ụlọ akụ gị.
Na ụlọ ahịa ụfọdụ ị nwekwara ohere ịkagbu iwu ahụ n'onwe gị, tumadi na mbido ya, mgbe ọ ka dị na nkwadebe ma ezitebeghị ya. Ma ogologo oge ị ga-apụ, ọ ga-esiri ha ike ịkagbu ya.
Ọ dị mkpa ka ị mee ya n'oge dị mkpirikpi, ebe ọ bụrụ na ezitere iwu ahụ, ịkagbu akagbuola onwe ya siri ike ịme, ọ bụ n'ihi na ejirila ụfọdụ akụkụ nke ego ahụ na mbupu. Mgbe ahụ ị ga-eme nloghachi na ha ga-ezitere gị obere ego karịa ka ị kwụrụ (belụsọ na nnukwu ụlọ ọrụ dịka Fnac, Amazon ...).
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Kedu ka ahịa eletrọnik si arụ ọrụ?
Ihe di iche iche nke E-commerce Technology